Ireo fironana malaza indrindra izay hampisy ny marketing nomerika | Martech Zone
Ireo fironana malaza indrindra izay hampisy ny marketing dizitaly
Talata, Martsa 4, 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ity misy Ethinos Digital Marketing infographic momba ny fironana ambony; marketing amin'ny atiny, fanatsarana finday, fanamafisana ny tahan'ny fiovam-po; izay mamaritra ny marketing nomerika ankehitriny ary mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny làlany ho avy.
Ny tiako indrindra amin'ity infographic ity dia ny fifantohany amin'ny fandefasana tsara ny paikadim-barotra nomerika. Ao amin'ny World Media Marketing World amin'ity volana ity dia ity no tena hanomezako hevi-baovao sy paikady. Ny mpivarotra dia mifantoka amin'ny TOFU (tampon'ny fantsona) ka tsy azony hoe firy ny fironana latsaka na tsy miova satria tsy kendrena na havaozina ny paikady.
Mody mody mitsidika ny fanavaozam-baovao farany, ny sioka na ny bilaogy ianao… aiza ny lalan'ny fiovam-po? Aiza ireo vato misakana? Mandrefy ny teboka tsirairay ve ianao amin'ny lalana hahitanao ny fiakaran'ny tahan'ny fidinana? Raha tsy izany dia mila izany.
Tags: Hafanàm-po an-barotrafironana marketing amin'ny dizitalyetinina
InPowered: hampiroborobo ny atiny atokisana an'ny antoko fahatelo
Mar 5, 2014 amin'ny 9: 18 AM
“Ny haino aman-jery sosialy dia mamokatra saika avo roa heny noho ny fampisehoana varotra, telemarketing, mailaka mivantana na PPC” - tena mahaliana izany.
Mar 5, 2014 amin'ny 9: 23 AM
Fantatro fa zava-dehibe ny haino aman-jery sosialy fa raha mijery an'ity aho dia toa betsaka ny zavatra tokony harahina…
Mar 6, 2014 amin'ny 7: 17 AM
Vaovao aho amin'ity marketing Digital ity. Manam-bintana tokoa aho amin'ny famakafakana ity lahatsoratra ity. Fampahalalana tena lehibe momba ny marketing nomerika. Tohizo ny fandefasana hafatra. Ity lahatsoratra ity dia manana mampiavaka sy kalitao betsaka